यो भिडियो हेरेपछि कसको मन रुँदैन होला त ? - Everest Dainik - News from Nepal
यो भिडियो हेरेपछि कसको मन रुँदैन होला त ?
वैशाख ३ गते सोमबार कुशे औंसी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको विशेष चाडको रुपमा मनाइएको छ । आफूलाई जन्म दिने आमालाई साक्षात भगवानको रुप मान्ने गर्दछौं । नौ महिना कोखमा राखेर जन्माउने, हुर्काउनका लागि दिनरात एक गरेकी हुन्छिन् । आफू खाई–नखाई उसकै लालनपालनमा आफ्नो सबै जीवन सुम्पिएकी हुन्छिन् । यस्ता हाम्रो प्यारी आमालाई हामीले जतिसुकै जे गरपनि त्यो कमै हुन्छ । आमाको दश धारा दूधको मूल्य हजारौं जन्मसम्म पनि हामी सन्तानले तिर्न सक्दैनौं । त्यसैले सन्तानहरुले आफ्नो आमालाई विशेष राख्न पनि यो दिनलाई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । हजारौं मन्दिर गएर पाएको स्वर्ग बराबर आमाको काखलाई लिने गरिन्छ । कहीं नपाएको खुशी आमाको काखमा पाउने गर्दछन् । यो दिन विदेशमा रहेको दाजुभाई, दिदीबहिनीहरुले समेत छुटाएनन् आमा भन्न ।
याे पनि पढ्नुस ‘सारी फरर’ मा अञ्जिली अधिकारीको गज्जब नृत्य (भिडियो)
आमा त्यो जीवित भगवान हुन् जसले हामीलाई जन्माउनु अघि बाट सम्झिरहेको हुन्छ। आफ्नो आयु घटाएर हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ। ती जीवित भगवानहरु अनेक गरेर जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन् ।
कुसे औंसी ‘आमाको मुख हेर्ने दिन’ एउटा कारुणिक दृश्य देखाएका छौं । घरबार विहिन एउटा परिवार जो लामो समयदेखि सडकमा जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरुको सबै सन्तान बहिरो छन्, हातका इसाराले मागेर जीवनयापन गरिरहेको छ।
याे पनि पढ्नुस 'चङ्गा चेट' को 'ढल्की नाचिदेउ न' सार्वजनिक (भिडियोसहित)
माग्दा माग्दै थकित भएर चौतारोमा बसिरहेको अवस्थामा हामीले उहाँहरुलाई देख्यौं। थकान मेट्न चौतारोमा बसी रहेका उनीहरुको कारुणिक गतिविधि यस्ता छन्। जुन हामीले भिडियोमा समावेस गरेका छौं ।